“Waxaan u arkaynaa deel-qaaf iyo meel ka dhac weyn iyo xad-gudub ay nagu samaynayaan qaadhaan bixiyeyaahsu”… | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“Waxaan u arkaynaa deel-qaaf iyo meel ka dhac weyn iyo xad-gudub ay nagu samaynayaan qaadhaan bixiyeyaahsu”…
Hargaysa (SDWO.com): Xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle, oo ka mid ah mudanayaasha golaha Wakiiladda Somaliland ayaa ka hadlay dhawaaqii ka soo baxay beesha caalamka gaar ahaan dawladaha iyo hay’adaha qaadhaan bixiyeyaasha ah ee Somaliland ka taageera doorashooyinka ee la xidhiidhay kala qaadista doorashooyinka.
Waxaanu sheegay in ay hadalkaasi u arkaan mid meel ka dhac, xad-gub iyo deel-qaaf ku ah jiritaanka qaranimadda Somaliland, isla markaana aanay Somaliland ogolaanaynin in beesha caalamku ku gumaysato dhaqaalaha ay kaga caawiso doorashooyinka.
Xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa, waxa kale oo uu sheegay in Somaliland ay awood u leedahay in ay daboosho lacagta ku baxaysa doorashooyinka, isla markaana ay ka maarmi karto dhaqaalaha dawladaha iyo qaadhaan bixiyeyaasha.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayay-na waxa uu yidhi “Waxaan u arkaynaa deel-qaaf iyo meel ka dhac weyn iyo xad-gudub ay ku samaynayaan madax banaanida Somaliland go’aamada ay qaran ahaan u qaadanayso ee madaxweynuhu nagu hogaaminayo.
Lanagu gumaysan maayo dhaqaalaha doorashada ayaan kaa caawiyaa, waanan bixin karnaa dawlad ahaan dhaqaalaha ay ku bixiyaan doorashooyinka Somaliland qaadhaan bixiyeyaashu. Hrgaysa-na, New York, looga talin maayo, waanu soo dhawaynaynaa beesha caalamka, laakiin marka ay noqoto arrimaha noo khaaska ah ee doorashooyinka iyo go’aamadayada na looga yeedhin maayo dibad, cidna ka yeeli mayno taasi”.
Sidoo kale xildhibaanku waxa uu ka hadlay tanaasulka musharaxnimadda madaxweyne ee uu sameeyay madaxweyne Siilaanyo, taasi oo uu ku tilmaamay mid aan hore uga dhicin wada qaaradda Afrika in madaxweyne xilkii hayaa uu ka hadho tartanka kursiga madaxweynenimo mar labaad.
Waxaanu intaasi ku daray xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali, in looga baahan yahay xisbiyadda mucaaridka ah in ay ka shaqeeyaan sidii wakhtigeeda loogu qaban lahaa doorashadda madaxtooyadda.
“Waa mid wadamadda Afrika ku yar in madaxweyne ka tanaasulo murashanimadiisii oo hadana doonaya in uu doorashadii madaxtooyada qabto, waana mid aan Afrika hore uga dhicin. waxaanay ahayd in axsaabta mucaaridku sidii ay doorashada u geli lahaayeen in ay sameeyaan. Madaxweyne Siilaanyo waxaan ka rejaynayaa in uu qaban doono doorasho xor iyo xalaal ah” ayuu yidhi xildhibaan Ayaanle.
Dhinaca kale xildhibaan Axmed Yaasiin waxa uu ka hadlay wada hadaladda ay xukuumadda Somaliland la furtay kooxda Khaatumo. Waxaanu yidhi “Waxaan u arkaa fursad dahabi ah wadahadalada xukuumaddu la furatay kooxda Khaatumo, cid kastoo oo meel ku wada nool-na waxaa u dan ah in ay wada hadlaan oo ay heshiiyaan. Aqoonsiga Somaliland wax uu ku jiraa Somaliland oo dhamays tiran, bari iyo galbeed-ba dawladnimadu-na waxa ay ku dhisantaa dadka oo isku wada qanacsan”.
Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle, ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrinta saami-qaybsiga kuraasta golaha Wakiiladda, taasi oo ah midda keentay in la kala qaado labadda doorasho ee madaxweynaha iyo golaha Wakiiladda.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayay-na waxa uu yidhi “Cabashada ka timid saami-qaybsiga kuraasta golaha Wakiiladda dadkii ay ka timid ayaan ka mid ahaa ee gobalka Awdal, cabashadaasina waxay ku salaysnayd saamigan lagu fadhiyo kuraasta golaha oo imika kusalaysan awood qaybsigii sanadkii 1960-kii markii aynu xornimada ka qaadanay gumaystihii Ingiriiska, taasoo ay ka cabanayeen gobolka aan ka soo jeedo iyo gobolo kaleba.
Waxaana qaylo dhaantii keentay in arrintaa talo qaran laga galo, taladaasina waxay soo martay maraaxil kala duwan. Mar waxaa wax laga waydiiyay xisbiyada qaranka, mar-na waxay soo martay golaha Wakiiladda ee ku guul daraystay in uu saami-qaybsiga kuraasta golaha Wakiiladda sameeyo sabab ay u samayn kari waayaana ma jirto, oo mudaneyaaasha golaha wakiiladu waxay ka soo kala jeedaan gobolo kala duwan.
Gobol walibana waxaa uu leeyahay taasay cadaaladu ku jirtaa, kumana heshiin karaan cod in la isku muquuniyaana meesha ma taalo. Sanadkan gudihiisa-na laguma dhamayn karo saami-qaybsiga kuraasta golaha Wakiilada ee goboladda dalka.
Waxaa laga yaabaa in xildhibaano kun cod ku fadhiyaan golaha Wakiilada, in ninna 5000 kun oo cod ku waayo, ninna 1000 kun cod ku fadhiyo, waana cadaalad darro taasi”.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in aanay dadweynaha gobolka Awdal ku qanacsanayn uun madaxweyne ku xigeen, hase yeeshee ay jiraan rag leh damac madaxweyne. “Ma jecli in reer Awdal iyo madaxweyne ku xigeenku noqdaan Masaaridii webiga Niil-ka ee marka la yidhaahdo qolaa foosta ka darsanaysa Masaaridu kor u boodaa.
Markaa gobolka Awdal imikaba wuu leeyahay rag damac madaxweyne leh, waanan soo dhawaynaynaa in madaxweyne ku xigeenka na lala arko”ayuu yidhi xildhibaan Axmed.